Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Haingam-piely ny vaovao tsy marina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Haingam-piely ny vaovao tsy marina
Tsy hita homelohina amin’ny fanambarana ny tsy fisian’ny filàna an’ireo fitaovana atao bango tokana amin’ny filazana ny fitambarany hoe «réseaux sociaux»-tambajotran-tserasera. Io no fitaovana ahafahan’ny rehetra mifampitafa amin’izay samy mpinamana, na manaparitaka hevitra sy vaovao ho an’ny rehetra mpampiasa an’izay tambajotra araky ny safidiny ho sehatra iombonany amin’ny maro. Mazava ho azy fa nampiova rivotra eo amin’ny fiarahamonina izany, niitatra ny sehatra fifanakalozana hevitra sy fampitana vaovao, tsy ferana ny fahafahana amin’ny fanaovana resabe. Nanamaivana ny fomba fiainana izany, tsy mila mivezivezy dia efa afaka mifamangivangy na tsy hihaona ara-batana fa hifankahita aman-tsary na iresaka mivantana ara-peo… Mitombo isanandro koa ny fandrosoan’ny fitaovana ahafahana manatsotsotra ny fanatanterahana ny asa aman-draharaha sy ny fanefana adidy. Andanin’izany tombony entin’ny réseaux sociaux izany dia misy koa ny lafy ratsiny : Ny fomba fanapariahana vaovao tsy marina sy izao lainga isan-karazany mampikorontana sainan’olo-maro na manetsika eloka tsy misy na mitera-doza sy mamoafady mihitsy.
Hatramin’ny ela moa na tamin’ny fotoana mbola tsy nisian’ny réseaux sociaux aza dia haingam-pandeha noho ny vaovao marina ny fielin’ny vaovao tsy mitombina sy izao karazana tsaho rehetra izao. Mainka moa fa ankehitriny izay tsy an-kihetsika am-pitoerana dia efa afaka mampahafantatra tranga iray amina olona tsy ferana isa amin’ny toerana mifanalavitra manerana izao tontolo izao. Aingam-pandeha noho ny rivotra, mifaninana amin’ny fandehan’ny hazavana ny fomba ahafahana mampita vaovao. Izay tombony izay ihany no mety hisehoan’ny kilemany. Sarotra ny fifehezana izay mitady hanararaotra izay fahafahana izay hanaovana zava-dratsy. Efa tsy mataho-tody toy ny famosaviana mihitsy izany fampielezana ny filazana fahafatesana tsy nihatra izany. Fanambarana toy izay anefa no nisy tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity izay nampitomboina tamin’ny filazana manaitra momba ny fifohazan’ilay tovovavy efa nalefan’ny mpitsabo any amin’ny tranom-paty taorian’ny fitilin’izy ireo niafara tamin’ny filazana ny fahafatesan’ilay tovovavy.
Rehefa nohadiadina anefa ny momba izay na fahagagana fitsanganana aorian’ny fahafatesana izay na fahadison’ny mpitsabo tamina fiheverana ho maty olona mbola tsy tapitra aina, dia voatery nanambara ny tsy fahamarinan’ilay izy ny tompon’andraikitra ao amin’ilay toeram-pitsabona izay voaendrikendrika tamin’izany tsaho izay tsy fantatra ny antony. Sarotra moa ny fahitana fitsipika azo ifehezana ny réseaux sociaux, tsy hita hobedaina noho izy tsy mivaingana, tsy azo sakanana fa mitsoriaka any anaty habakabaka. Fantatra ihany anefa ireo nipoiran’ilay tsaho sy vaovao tsy marina, ka tsy maintsy hisy ny fanamelohana izay fantatra ho tompon’andraikitra.